Mohamed Salah Oo Ka Hadlay Sida Uu Ugu Daydo Zidane, Waxa Uu Ka Filayo Finalka, Awoodda Real Madrid, Kaalinta Klopp Iyo La-shaqaynta Mane & Firmino | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Mohamed Salah Oo Ka Hadlay Sida Uu Ugu Daydo Zidane, Waxa Uu Ka Filayo Finalka, Awoodda Real Madrid, Kaalinta Klopp Iyo La-shaqaynta Mane & Firmino
(25-5-2018) Xiddiga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Mohamed Salah ayaa waraysi dheer oo uu bixiyey waxa uu kaga hadlay ciyaarta habeen dambe dhex mari doonta Real Madrid vs Liverpool ee finalka Champions League, xiddigihii uu ku dayan jiray markii uu carruurta ahaa, siday u wada shaqeeyaan Mane & Firmino, guubaabada Tababare Klopp iyo arrimo kale.
Salah oo maanta u warramay website-ka UEFA, ayaa waxa uu ugu horreyn sheegay inuu ku dayan jiray saddex ciyaaryahan oo kala ahaa halyeygii xulka qaranka Talyaaniga ee Francesco Totti, xiddigii Brazil ee Ronaldo iyo tababaraha hadda Real Madrid, Zinedine Zidane.
“Carruurnimadaydii, waxa geesiyadayda ahaa Francesco Totti, Ronaldo iyo Zinedine Zidane” ayuu yidhi.
Salah oo la weydiiyey waxa uu ka filayo ciyaarta finalka iyo siday Real Madrid ku qaabili doonto, waxa uu ku jawaabay: “Waa koox ku guuleysatay koobkan in ka badan cid kasta oo kale. Waa kooxdii ku guuleysatay saddexda jeer Champions League afartii sannadood ee tegay, waxay leeyihiin khibrad. Hore ayey ugu guuleysteen, laakiin ciyaartani waa mid, laba maaha, sidaas dardeed, kaliya waxa aanu u baahanahay inaanu diiradda saarno oo aanaan ka fikirin wixii hore. Marka aad ciyaarta gasho, waa 11 ka hor imanaya 11.”
Salah oo ka jawaabayey su’aal kale oo laga weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay in koobka lagu guuleysto, waxa uu yidhi: “Runtii ma garanayo wax aan idhaahdo, laakiin inaad ku guuleysato Champions League wax walba way ka duwan tahay. Waa wax weyn inaad ku guuleysato Champions League, inaad ciyaarto finalkuna waa riyo rumowday. Cid walba oo magaalada joogta way ku faraxsan tahay kooxda. Waxa aan xasuustaa laba sannadood ka hor, waxaan koobka ka daawanayey Masar, waxaanan arkay sida jewigu yahay.”
Mohamed Salah waxa uu sheegay inuu ku hamiyi jiray inuu ku guuleysto kabta dahabka ah ee uu sannadkan ka qaaday horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, waxaanu xusay inuu ku dedaali doono inuu sii joogteeyo qaab ciyaareedkaas wanaagsan.
“Shaqo adag ayaa fure u ahayd guusha, waxa ugu muhiimsanna waa in heerkaas lasii joogo oo sannadka dambena sidii aan u shaqeeyo. Hadda waxa aanu taaganahay final, waana inaanu ka fikirno finalka oo kaliya, waxaanan aaminsanahay inaanu ciyaar ku nimid. Laba sannadood ka hor waxaan joogay Roma oo aan laba xili ciyaareed oo wanaagsan la qaatay, qof walbana wuxuu iga codsaday inaan sii joogo, laakiin anigay iga go’nayd inaan kusoo laabto England oo aan ku guuleysto.” Sidaas ayuu mar kale yidhi.
Xiddiga reer Masar waxa uu tibaaxay in tababare Klopp uu ciyaartoy kasta siiyo xorriyad iyo kalsooni marka uu garoonka ku jiro, laacib kastaana uu fursad u haysto inuu goolal dhaliyo, saaxiib dhowna ay la yihiin tababarahooda.
Ugu dambayn, waxa uu Salah sheegay in Mane iyo Firmino ay wada shaqayn fiican leeyihiin, mid kastaana isku dayo inuu ka kale caawiyo, taasina ay u suurtogalisay in ay dhaliyaan 29 gool tartanka Champions League xili icyaareedkan.